चलचित्रहरु तपाइँ YouTube मा नि: शुल्क (र कानूनी) हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई फुर्सद दिनुहोस्
गेब्रिएला मोरन | | सिइन, क्लासिक सिनेमा, विधाहरु द्वारा सिनेमा
यूट्यूब अझै पनी मुख्य र धेरै प्रयोग प्लेटफार्महरु मध्ये एक हो त्यो एक सामाजिक नेटवर्क को रूप मा कार्य गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरु सामान्यतया भिडियो साझा, यसैले त्यहाँ मुक्त गर्न को लागी पूर्ण फिल्महरु हेर्नको लागी सक्षम हुने सम्भावना छ। जे होस्, त्यहाँ प्रतिलिपि अधिकार र केहि नियमहरु छन् कि पृष्ठ को सामग्री लाई सीमित गर्दछ ताकि कानून को बाधाहरु मा नआउन को लागी। यो समय मँ केहि फिल्महरु प्रस्तुत गर्दछु कि तपाइँ YouTube मा नि: शुल्क र कानूनी रुपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यो धेरै रोचक भूखंडहरु छन्। यदि तपाइँ क्लासिक फिल्महरु को एक प्रशंसक हुनुहुन्छ, तपाइँ सामग्री मैले तयार गरेको पढ्न रोक्न सक्दैन!
जबकि यो सत्य हो कि स्ट्रिमि platforms प्लेटफर्महरु लाई उनीहरुको प्रयोगकर्ताहरु को बीच बजार को एक ठूलो हिस्सा छ, यूट्यूब विकल्पहरु संग अन्य प्लेटफर्महरुमा उपलब्ध छैन कि एक मुक्त विकल्प को प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी वृत्तचित्र देखि महान चलचित्र क्लासिक्स सम्म सबै पाउन सक्छौं! म तपाइँलाई पढ्न जारी राख्न को लागी आमन्त्रित गर्दछु ताकि तपाइँ YouTube को एक मामिलामा सबैभन्दा राम्रो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ क्लासिक फीचर फिल्महरु प्रतिलिपि अधिकार को अधीनमा छैनन्।
विकल्पहरु जुन म प्रस्तुत गर्दछु त्यो समय संग मेल खान्छ जब टेक्नोलोजी धेरै टाढा थियो के हामी आज जान्दछौं: उनीहरु कालो र सेतो छन् र केहि मौन फिल्महरु संग मेल खान्छ। तर एलकथाहरु को गुणवत्ता धेरै उच्च र अकल्पनीय सांस्कृतिक मूल्य को हो। चयन जस्तै चार्ल्स चैपलिन, साथ साथै पहिलो पिशाच फिल्म को रूप मा पात्रहरु को सान्दर्भिक फिल्महरु देखाउँछ, अग्रणी ज़ोंबी फिल्महरु मध्ये एक पनि प्रस्तुत गरीएको छ, साथ साथै भविष्य देखि दूरदर्शी कथाहरु र हत्यारा र सम्मोहन शामिल पागल कथाहरु।
1 सुनको भीड
2 एक्सप्रेसो मा अलार्म (महिला गायब)
3 Nosferatu: डरावनी को एक सिम्फनी
5 जीवित मृतको रात
6 जनरल को मशीनिस्ट
7 डा क्यालगरी क्याबिनेट
8 के त्यहाँ धेरै फिल्महरु छन् कि तपाइँ YouTube मा कानूनी रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ?
यो १ 1925 २५ मा प्रीमियर भयो र छ फिल्म आइकन चार्ल्स चैपलिन अभिनित, जसले फिल्म लेखे, निर्देशन र निर्माण गरे। "गोल्डन रश" उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध कामहरु मध्ये एक मानिन्छ र दुई ओस्कर नामांकन प्राप्त भयो जब ध्वनि संस्करण 1942 मा जारी भएको थियो।
तर्क छ सुन को खोजी मा एक tramp मा आधारित छ र क्यानाडा मा Klondike सारियो जहाँ यस्तो बहुमूल्य सामग्री को ठूलो मात्रा मा अस्तित्व को लागी अनुमान गरीएको थियो। बाटोमा, उहाँ एक आँधीबेहरी बाट छक्क पर्नुहुन्छ कि उसलाई एक परित्यक्त घरमा शरण लिन बाध्य छ कि एक खतरनाक हत्यारा को घर हो! भाग्य घर मा एक तेस्रो पाहुना ल्याउँछ र तूफान को कारणले कोहि ठाउँ छोड्न सक्दैनन्।
तीन पात्रहरु सँगै बस्न जान्छन् कि उनीहरु घर छोड्न सक्छन्। केहि दिन पछि, तूफान बन्द हुन्छ र प्रत्येक एक आफ्नो बाटो मा जारी रहन्छ जसको अन्तिम गन्तव्य एउटै उद्देश्य थियो: सुन को खान खोज्न को लागी!
हाम्रो नायक यात्रा को बाटो को दौरान, उहाँ जर्जिया लाई भेट्नुहुन्छ। एक सुन्दर महिला जसको साथ उनी प्रेममा पर्छन् तर जसको साथ उनी अन्तमा अलग हुन्छन्। कहानीले हामीलाई धेरै साहसिक कार्यहरु बताउँछ कि हाम्रा पात्रहरु लाई आफ्नो प्रारम्भिक लक्ष्य सम्म पुग्न अघि जानु पर्छ। यो चैपलिन को निर्दोष प्रदर्शन को नोट गर्नु को कारण हो जसले सधैं आफ्नो अजीब हास्य संग दर्शकहरुलाई प्रोत्साहित गर्दछ कि उनको स्पष्ट कालो र सेतो फिल्महरु लाई चित्रण गर्दछ।
कथा को अन्त्य खुसी छ, किनकि नायक उसले के चाहन्छन् पाउँछ। जे होस्, अन्त्यमा उसले महसुस गर्छ कि उसले साँच्चै के हासिल गरेको छ त्यो सुनको लागी उसले खोजिरहेको भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
एक्सप्रेसो मा अलार्म (महिला गायब)
एक उत्तम र क्लासिक थ्रिलर रहस्य को पूर्ण प्रश्न मा शीर्षक को कथानक हो। यो १ 1938 ३ मा ठूलो पर्दा मा रिलीज भएको थियो र न्यु योर्क टाइम्स यो बर्ष को सबै भन्दा राम्रो फिल्म को दर्जा दिए। यो अल्फ्रेड हिचकक द्वारा निर्देशित एक ब्रिटिश फिल्म है, कहानी उपन्यास "द व्हील स्पिन" मा आधारित छ। नायक मार्गरेट लकवुड, पॉल लुकास, बेसिल रेडफोर्ड Redgrave र डेम मे Whitty बाट बनेका छन्।
कथानकले हामीलाई एक को घर फिर्ता यात्रा बताउँछ लन्डन फर्कने यात्रुहरु को एक जोडी, आफ्नो घर। खराब मौसम को कारण ट्रेन रोक्न बाध्य छन् ताकि यात्रुहरु सुरक्षित रहन्छन्; यात्रा गर्ने जोडी एक टाढाको शहर मा राती रहन्छन्। रोचक भाग जब सुरु हुन्छ जब उनीहरु ट्रेन मा फर्कन्छन् र उनीहरुलाई थाहा हुन्छ कि एक यात्री हराएको छ। घर को uneventful यात्रा एक दुःस्वप्न मा बदल्न को बारे मा थियो!
प्रत्येक यात्री एक संदिग्ध बन्छ। कथा को विकास उनीहरु मध्ये एक भन्दा बढि को रोचक रहस्य प्रकट गर्दछ।
Nosferatu: डरावनी को एक सिम्फनी
यदि तपाइँ एक पिशाच प्रेमी हुनुहुन्छ, तपाइँ यसलाई देख्नु पर्छ! Nosferatu पहिलो फिल्म ड्रेकुला को साँचो कथा संग सम्बन्धित छ कि ब्राम स्टोकर द्वारा लिखित थियो। यस तथ्य को बावजूद कि त्यहाँ एक विवाद र निर्देशक फ्रेडरिक विल्हेम Murnau को मूल कथा को उत्तराधिकारीहरु को बिरुद्ध केही कानूनी मुद्दाहरु थिए, यो फिल्म लाई फिल्म शैली को इतिहास मा सबै भन्दा राम्रो पिशाच फिल्महरु को शुरुआत को रूप मा मानिन्छ।
एक युवा जोडी कथा मा तारा, पति जसको नाम हो काउन्टर Orlok संग एक सम्झौता बन्द गर्न Hutter व्यापार मा ट्रांसिल्वेनिया पठाइन्छ। एक पटक त्यहाँ सराय मा स्थापित, Hutter एक भयानक कागजात पत्ता लगाउँछ कि पिशाच को बारे मा कुरा गर्दछ र उसलाई चासो छोड्छ। पछि उनी गिनती को महल मा भाग लिन्छन् जहाँ उनी भयावह मालिक लाई भेट्छन्।
महल को लागी तपाइँको यात्रा पछि दिन, हटरले उनको घाँटीमा दुईवटा निशान भेट्टाए जो कीराको टोकाईसंग सम्बन्धित छ। उनले घटनालाई बढी महत्व दिएनन् जब सम्म उनी डीउनले पत्ता लगाए कि उनी एक वास्तविक पिशाच, काउन्ट ओर्लोक को उपस्थिति मा थिए!
उसको घाँटीमा भएको निशानले हामीलाई प्रश्न छोड्छ: के अब हटरलाई रगतको उस्तै तिर्खा लाग्ने छ कि उसको आफ्नै श्रीमतीले चाहेको हो?
यो १ 1926 २XNUMX मा जारी भएको जर्मन मूलको एक मौन फिल्म हो र त्यो 2026 मा संसारको वास्तविकता उठायो त्यो हो, १०० बर्ष पछि!
फिल्म हामीलाई को बारे मा बताउँछ सामाजिक वर्ग र भेदभाव को विभाजन कि त्यहाँ दुई को बीचमा छ जहाँ श्रमिक वर्ग भूमिगत छिमेकमा बस्छ र बाहिरी संसारमा बाहिर जान निषेध गरिएको छ। भेदभाव र दमन बाट थकित र एक रोबोट द्वारा उत्तेजित, lश्रमिकहरु विशेषाधिकार प्राप्त बिरुद्ध विद्रोह गर्ने निर्णय गर्छन्। उनीहरूले शहर र शान्तिलाई नष्ट गर्ने धम्की दिए जसमा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जसमा बौद्धिक र आर्थिक शक्ति भएका मानिसहरु थिए।
हामी दुई मुख्य पात्रहरु, प्रत्येक सामाजिक वर्ग बाट एक नेता, नायक र नायक को रूप मा पाउँछौं। उनीहरु c को ख्याल राख्छन्सम्मान र सहिष्णुता मा आधारित सम्झौताहरु।
यो धेरै रोचक दृष्टिकोण हो कि भविष्य को प्रस्तुत गरीएको छ कि आज अब धेरै टाढा देखिन्छ।
महानगर बनेको छ युनेस्को द्वारा प्रदान गरिएको "मेमोरी अफ द वर्ल्ड" को श्रेणी बाट सम्मानित हुने पहिलो फिल्म। मान्यता गहिराई जसको साथ सामाजिक मुद्दाहरु लाई सम्बोधन गरिएको थियो कारण हो।
जीवित मृतको रात
यो १ 1968 in मा जारी एक डरावनी फिल्म हो र त्यो ज़ोंबी केन्द्रित फिल्महरु को विधा मा क्रान्तिकारी। यो कथानक मा "हिड्ने मृत" द्वारा खेलेको भूमिका को कारण यो श्रेणी मा सबै भन्दा राम्रो फिल्म को रूप मा मानिन्छ र जो धेरै फिल्महरु लाई प्रभावित गर्दछ कि यस पछि रिलीज हुनेछ। यस विषय द्वारा उत्पन्न सफलता को कारण, छ अध्याय संग एक गाथा विकसित भएको थियो। सिक्वेल वर्ष 1978, 1985, 2005, 2007 र 2009 मा रिलीज गरियो।
युट्युब मा उपलब्ध छ, उद्घाटन फिल्म को बारे मा छ मानिसहरुको एउटा समूह जो आफैंलाई एक प्रकारको खेतमा एक्लो भेट्टाउँछन् र मरेको समूह जीवनमा फर्के पछि आफ्नो जीवनको लागी लड्छन्। कहानी दुई भाइहरु जो त्यो ठाउँ मा शरण लिन्छन् र जो उनीहरु मात्र बाँच्न को लागी कोशिश गरीरहेका छैनन् भनेर पत्ता लगाउने संग शुरू हुन्छ।
यसको समय को लागी, फिल्म लाश द्वारा निष्पादित हिंसात्मक र अप्रिय दृश्यहरु को कारण दर्शकहरु बीच आतंक उत्पन्न भयो।
जनरल को मशीनिस्ट
बस्टर Keaton चार्ल्स चैपलिन को समय बाट एक प्रसिद्ध अभिनेता हो। यो एक मौन, कालो र सेतो फिल्म हो कि कमेडी को शैली संग सम्बन्धित छ। यो 1862 मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा गृहयुद्ध को समयमा भएको एक वास्तविक घटना को एक अनुकूलन हो।
इतिहासले हामीलाई जीवन बताउँछ जोनी ग्रे, एक रेल चालक पश्चिमी र अटलांटिक रेलमार्ग कम्पनी को। उनको एनाबेल ली संग प्रेम सम्बन्ध छ, जसले उनलाई सेनामा भर्ना हुन सोध्छन् जब युद्ध सुरु हुन्छ। जे होस्, हाम्रो नायक यो स्वीकार्य छैन किनभने उनीहरु एक कुशल एक मशिनिस्ट को रूप मा आफ्नो कौशल लाई विचार गर्छन्। सेनाको अस्वीकारको बारेमा थाहा पाएपछि, एनाबेलले जोनीलाई कायरको रूपमा त्यागे।
यो केहि समय लाग्छ पूर्व साथी को लागी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मा फेरि भेट्न को लागी कि उनीहरुको जीवन जोखिम मा राख्छ।
यो उल्लेख गर्न को लागी सान्दर्भिक छ कि फिल्म १ 1926 २ in मा यसको प्रीमियर को समयमा राम्रो संग प्राप्त भएको थिएन, यो धेरै बर्ष पछि सम्म थियो कि यो लोकप्रियता हासिल गरीयो र यो अभिनेता लाई खेलीएको सबैभन्दा राम्रो भूमिका मध्ये एक मानिन्छ।
डा क्यालगरी क्याबिनेट
हामी मौन विधा र कालो र सेतो संग जारी छ। डा। क्यालगरी को क्याबिनेट एक जर्मन डरावनी फिल्म हो कि १ 1920 २० मा रिलीज भयो। एलउनी कथा एक मनोचिकित्सक को हत्या को बारे मा बताउँछन् जो सम्मोहित गर्न को लागी क्षमता छ र जो ती अपराधहरु गर्न एक स्लीपवाकर को उपयोग गर्दछ!
डा। क्यालगरी एक मास्टरमाइन्ड जो आफ्नो कौशल र sleepwalker को कमजोरी शो को एक प्रकार हो कि स्थानीयहरु को मनोरन्जन मा राख्न को लागी लाभ उठाउँछन्। यो कहानी पुर्वनिरीक्षण मा भनिएको छ र फ्रान्सिस द्वारा बताईएको छ, कथा मा मुख्य पात्रहरु मध्ये एक।
सामान्य मा, कथा यस तथ्य को कारण हो कि कथानक पागलपन र दिमाग खेलहरु संग सम्बन्धित विषयहरु को बारे मा कुरा गर्दछ को कारण एक कालो दृश्य शैली बाट घेरिएको छ। फिल्म लाई मानिन्छ जर्मन अभिव्यक्तिवादी सिनेमा को सबैभन्दा ठूलो काम। फिल्म को स्क्रिप्ट यसको निर्माताहरु को व्यक्तिगत अनुभवहरु मा आधारित छ: हंस Janowitz र कार्ल मेयर। दुबै शांतिवादी थिए र एक अनोखी तरीका मा शक्ति को प्रयोग गर्न को लागी कि सरकारले सेना मा प्रयोग गरीयो को कोशिश गरीयो।
यो निस्सन्देह एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर हो कि दर्शकहरु को दिमाग संग खेल्छ र आश्चर्य को तरीका मा कथा लाई उजागर गरीएको छ धन्यवाद।
के त्यहाँ धेरै फिल्महरु छन् कि तपाइँ YouTube मा कानूनी रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ?
पक्कै त्यहाँ छ! मैले प्रस्तुत गरेको शीर्षक कानूनी सामग्री को एक सानो स्वाद हो कि हामी पाउन सक्छौं। यस पटक म क्लासिक फिल्महरु मा ध्यान केन्द्रित गरेको छु कि समय संग धेरै चासो जगाएको छ। अगाडि, त्यहाँ अधिक वर्तमान वृत्तचित्र र फिल्महरु उपलब्ध छन् र हामी यसलाई कानूनी र मुक्त को लागी रमाईलो गर्न सक्छौं।
म पहिलो उल्लेख बिना अलविदा भन्न चाहन्न कि त्यहाँ अनगिनत युक्तिहरु जस्तै यूट्यूब को रूप मा प्लेटफार्महरु मा मुक्त सामग्री खोज्न को लागी छन्, तथापि, हामीलाई याद छ कि यी अभ्यासहरु को धेरै अवैध छन्। एक राम्रो संसार मा योगदान गर्ने प्रयास गरौं प्रतिलिपि अधिकार उल्ल्घन गर्ने अनैतिक कार्यहरु बाट बच्न र त्यो पनि फिल्म निर्माण गर्न मा संलग्न काम लायक छ।
मलाई आशा छ कि तपाइँ फिल्महरु को छनौट को आनन्द लिनुहुन्छ कि तपाइँ YouTube मा कानूनी रूप बाट हेर्न सक्नुहुन्छ!
लेखको पूर्ण मार्ग: मलाई फुर्सद दिनुहोस् » सिइन » चलचित्रहरु जुन तपाइँ YouTube मा नि: शुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ (र कानूनी)